-हामी जादूगर हैनौं तर भोट माग्ने भाषण गर्दा उत्तेजित भाका जरुर हौं – सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,, – Waikhari
गृहपृष्ठ विविध -हामी जादूगर हैनौं तर भोट माग्ने भाषण गर्दा उत्तेजित भाका जरुर हौं – सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,,
-हामी जादूगर हैनौं तर भोट माग्ने भाषण गर्दा उत्तेजित भाका जरुर हौं – सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,,
सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू,,
तपाई आक्रामक बाट रक्षात्मक बन्नुभएको छ । भन्न थाल्नु भएको छ- “हामी जादुगर हैनौं,फ्याट्ट रूमाल देखाएर झ्याट्ट अण्डा निकाल्ने । मलाई कसैले टेरेनन,कर्मचारी पुलिस प्रशासन कसैले पनि ! यस्तै यस्तै..!”
देश र सिस्टमको अवस्था तपाईलाई राम्रोसंग थाहा थियो । तर तपाई केवल भिड कसरी हाँस्छ र के गरे ताली पड्काउँछ भन्ने कुरामा बढ़ी केन्द्रित हनु भो । दुई तिहाई भोटको महत्व अलि बुझ्नुभएन तपाईले जस्तो लाग्छ । त्यो शानदार विजय अभिमान भन्दा जिम्मेवारी हो भनेर तपाईका आसेपासेले बताएनन तपाईलाई । तपाई ऊटपटाँग गरेर हँसाइरहने र उनीहरू सधै राज्य संयन्त्रमा तर मारिरहने अवस्थाको सृजना तपाई आफ़ैले गर्नु भो । अहिले तपाईलाई धेरैले जोकर प्रधानमन्त्री भन्न थालिसके । टेर्न छोडिसके सत्य हो ।
समय बितेको छैन । तपाई गम्भीर बन्नु पर्छ । सधैको हाँसो ठट्टा र कांग्रेस लगायतका विपक्षीलाई कटाक्ष मात्र गरेर सरकार चलाउन निकै धौ हुन्छ प्रधानमन्त्री ज्यू । यो कुरो तपाईले बुझिसक्नुभो । अझै चार वर्ष तपाई संग छ । जसले जति विरोध र आलोचना गरे पनि गणितीय रूपमा तपाईको सरकार ढाल्ने सामर्थ्य कसैमा छैन ।
तपाई एक्लो मान्छे,लैजानु पनि पक्कै केही छैन र थुपारिदिनु पनि कसैलाई केही छैन पक्कै । तपाईको कमजोरी भनेको तपाईको स्वेच्छाचारी शैली र ‘सेन्स अफ कृटिकल ह्यूमर’ हो । तपाई जस्तो भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ ती भाषा या विपक्षी नेतालाई या गाइजात्राको हांस्य-व्यंग्य कलाकारलाई मात्र सुहाउँछन। तपाई प्रधानमन्त्री हो, तपाईलाई सुहाउँदैनन । तपाईको अर्को कमजोरी भनेको गुटको संरक्षण र गुटका मानिसको आरक्षण हो जसको कारण तपाईकै पार्टी भित्र ठूलो भूसको आगो सल्किइरहेको हामी बाहिरका मान्छेले पनि देख्न र महसूस गर्न सक्छौं ।
विरोध हैन प्रधानमन्त्री ज्यू, सदीक्षा हो । चार वर्ष अझै पनि देश तपाईको हातमा छ । चार वर्षको तपाईको सत्प्रयासले कम्युनिस्ट पार्टीलाई थप दश वर्ष देश चलाउने जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिरहन सक्छ । अहिलेकै अवस्था हो भने चाहिं विश्व बाट हराइरहेको कम्यूनिज्म कम्तिमा नाममा त बाँकी थियो नेपालमा,त्यो पनि हराउने खतरा हामी देख्छौं ।
हामी आलोचकहरू बरु तपाईका सच्चा साथी हौं,शुभचिन्तक हौं । तपाईले जसो गरे पनि तपाईको बचाऊमा अरुलाई आक्रमण गर्ने अरिंगालहरू भने तपाईलाई,तपाईको पार्टीलाई र सिंगो कम्यूनिष्ट सिद्धान्तलाई अफ्टेरोमा पार्ने साधन र कारण बन्न सक्छन होस पूर्याउनुहोला ।
मानिसहरुले कुरा गरिरहेको सुन्छु म- “हामीले कमाउने,हामी बन्ने मौका यही हो । पहिले कांग्रेसले खायो अब हामीले ख़ाने हो “। यस्तो भन्ने मानिसहरु तपाईको बचाऊ गर्न लागि पर्ने गर्छन । तपाईको सफलता र प्रतिष्ठाको लागि होइन,आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि ।
स्वयं तपाईलाई अनुभूत भइसक्यो मानिसले तपाईलाई टेर्न छोडिसके । अभिभावक ‘वेटलेस’ भए भने सन्तानले टेर्न छोड्छन प्रधानमन्त्री ज्यू, नमिठो सत्य यही हो । धेरै केही गर्नै पर्दैन । काम यो वा यो भन्दा थोरै बढ़ी बढ़ी रफ्तारमा गरे पनि हुन्छ, जादूको छडी कसैले खोजेका पनि छैनन तर मुख कम चलाउनुस बिन्ति । जे बोलोस तपाईको कामले बोलोस । चार वर्ष अझै बाँकि छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सबैले टेर्ने,सबैले सहयोग गर्ने र सबैले ‘वाह’ भन्ने परिस्थिति बनोस ।
तपाईको शुभचिन्तक परदेशबाट । ??